Hanti Dhawraha Guud Oo Ku Guuldaraystay Inuu Xakameeyo Musuq Maasuqa Agaasimaha Guud Ee Wasaarada Waxbarashada | Baligubadlemedia.com
Hanti Dhawraha Guud Oo Ku Guuldaraystay Inuu Xakameeyo Musuq Maasuqa Agaasimaha Guud Ee Wasaarada Waxbarashada
Hanti dhawraha guud ee qaranka oo ayaa ku guul daraystay inuu soo bandhigo natiijada baadhisyo kala duwan oo uu ka sameeyey hay’addo dawladeed oo musuq maasuq ragaadiyey.
Hanti dhawraha guud oo mudadii uu talada hayey hogaamiye Muuse Biixi sameeyey baadhis tiro badan oo uu farageliyey nidaamka maaliyadeed ee qaar ka mid ah hay’addaha dawlada ayaan ilaa hada wax natiijo ah soo bandhigin iyada oo qaar ka mid ah xafiisyada uu baadhay uu ka muuqdo musuq maasuqa ay samaynayaan masuuliyiinta ku magacaabani.
Hanti dhawraha guud ee qaranka ayaa meelaha uu musuqu hadheeyey ee aanu ilaa hada natiijada baadhistiis soo bandhigin waxa ugu horeysa wasaarada waxbarashada oo agaasimaha guud Axmed Abokor Axmed ka gaystay musuqii ugu badnaa ee uu ku dhaco mashaariic lagu horumarinayey waxbarashada somaliland.
Agaasimaha awooda badan ka haysta madaxtooyada ee wasaarada waxbarashada Axmed Abokor Maxamed ayaa mudadii dib loogu soo magacaabay wasaaradaasi waxa uu gaystay falal musuq maasuq oo dhaawac ku keenay mashaariicda waxbarasho ee dalka, iyada oo hanti dhawraha guudna uu iska indho tiray mudadii uu baadhista ka waday wasaaradaasi isla markaana aanu ilaa maanta bulshada u soo bandhigin natiijada ka soo baxday baadhistaankiisa.
Falalkii musuq maasuq ee ugu dambeeyey oo uu gaystay agaasimaha guud ee wasaarada waxbarashadu ayaa noqday mid uu ku leexsaday lacag dhan $400,000 oo lagu horumarinayay Waxbarashada Reer-guuraaga.
Agaasimaha Guud ee Wasaarada Waxbarashadda ayaa lacagtan marsaday NGO uu gaar u leeyahay, kaasoo uu siiyay mashruuc lagu horumarinayay waxbarashada xaaladaha degdega ah (Education Emergency).
Mashruucan oo ay fulintiisa qaadatay haayada UNICEF, isla markaasna laga maal-galinayay sanduuqa waxbarashada ee Education Cannot Wait ayaa haayada UNICEF iyadoo kaashanaysa Agaasimahan qandaraas hoosaad sii siisay ururka SOYCA ee uu Agaasimuhu leeyahay, iyadoo loo siiyay inuu mashruucan ka fuliyo gobollada Saaxil, Gabilay iyo Maroodi-jeex.
Mashruucan ayaa waxa ku baxaysa $6.7M, waxaanay bishii la soo dhaafay ay haayada UNICEF u shubtay ururka SOYCA ee Agaasime Axmed Abokor fayskii koowaad ee kharashka fulinta mashruuca oo dhan $400,000.
Ururka SOYCA oo xaruntiisa guud ay tahay magaalada Berbera, ayaa waxa aasaasay Agaasimaha Guud ee Wasaarada Waxbarashadda, waxaana hada maamulka ururka u haysa walaashii Khadra Abokor.